Maungtintyin: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အမြင်
အရာရာတိုင်းသည် ပြောင်းလဲသည့်အခြေအနေအပေါ်တွင် ရှိ၏။ အရာရာတိုင်းသည် ဆက်သွယ်မှုရှိနေ၏။ ပညာသည် သဘာဝဖြစ်သောအရာထက် ပိုလွန်သည်မရှိ။ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘဲ တစ်စုံတစ်ခုသည် မတည်။ အခြေခံအားဖြင့် ဖြုန်းတီးနိုင်သော အကြောင်းတရားအဖြစ် အရာဝတ္ထုမည်သည် မရှိ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်ပင်များ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ လူများနှင့် လေ၊ ရေ၊ မြေ စသဖြင့် ပါဝင်ကြ၏။ ယင်းတို့သည်လည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန်အမှီသဟဲပြုနေပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လျော်ညီစွာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထား၏။ ကမ္ဘာလောကကြီး၏တိုးတက်မှုနှင့်ကြီးထွားမှုသည် အားလုံးသောတည်ရှိမှုများနှင့် စပ်ဆက်မှုရှိနေပြီး စီးဆင်းနေသော ပြောင်းလဲနေသောအရာများ ဖြစ်ပါ၏။ စီးဆင်းမှုကို ကြန့်ကြာစေသော မည့်သည့်အရာဖြစ်ဖြစ် ကြန့်ကြာမှုကို ဖြစ်စေသောထိုအရာသည် အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေပါ၏။ သဘာဝဖြစ်စဉ်များကို တားဆီးပိတ်ပင်ပါက ပတ်ဝန်းကျင်သည် ၀ရုန်းသုန်းကားဖြစ်ခြင်းသို့ ဦးတည်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါ၏။
မျက်မှောက်ခေတ်တွင် လူသားတို့၏ အကျိုးစီးပွါးအတွက် သဘာဝရင်းမြစ်များကို ဆင်ခြင်ကင်းမဲ့စွာ အသုံးပြုခြင်း၊ မှားယွင်းသော လမ်းညွန်းမှုများက ဂေဟဗေဒပျက်စီးမှုများကို ဖြစ်စေပါ၏။ စက်မှုထွန်းကားမှုသည် လူသားတို့၏ဘ၀ကို ခြိမ်းခြောက်မှုနှစ်ခု ပြုလုပ်၏။ ပထမတွင် လူသားဘ၀ကို ဖျက်စီးရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်နွမ်းမှုများကို ဖြစ်စေ၏။ ဒုတိယတွင် အစားထိုးမရနိုင်သော သဘာဝရင်းမြစ်များကို ကုန်ခမ်းစေ၏။ အဆိပ်အာနိသင်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများက ဖြစ်စေသော ညစ်နွမ်းမှုများ၊ တောပြုန်းတီးမှုများ၊ သဲကန္တာရ ဖြစ်ထွန်းမှုများနှင့် လူတို့က ပြုလုပ်သော အခြားအကြောင်း တရားများစွာက ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေ၏။
စက်မှုထွန်းကားမှုကြောင့် များစွာသော စက်ရုံများ၊ မော်တော်ကားများ၊ လေယာဉ်များ၊ အသီးသီးသောစက်များမှ ကာဗွန်မို နောက်ဆိုက် (carbonmonxide) (အဆင်းအနံ့ မရှိသော အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့၊ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် ဓာတ်ငွေ့)၊ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် (hydrocarbon) (ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ကာ ဗွန်ဓာတ်ပေါင်း) နှင့် အခြား ဓာတုဗေဒနှင့်ပတ်သက်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ(other chemical wastes)ထုတ်လွှင့်မှုများက လေကို ညစ်နွမ်းစေ၏။ ဓာတုဗေဒနှင့် ပတ်သက်သော အမျိုးမျိုးသည် ရေကို ညစ်နွမ်းစေ၏။ ကျောက်မီးသွေးနှင့် ဓာတ်ဆီများ လောင်ကျွမ်းမှုများမှ လေကို ညစ်နွမ်းစေ၏။ အက်ဆစ်မိုးများရွာသွန်းခြင်းနှင့် အိုဇုန်းလွှာများ ပေါက်ကွဲခြင်းများ ဖြစ်စေ၏။
နေမှ ဖြာထွက်ကျရောက်လာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်(ultra-violet) များသည် ကမ္ဘာမြေအထက် ၁၂-မိုင်ခန့် ဖြစ်သော အိုးဇုန်းလွှာမှတဆင့် ကမ္ဘာမြေသို့ရောက်ရှိ၏။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များသည် ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ ကျရောက်ပြီး ရေခဲတောင်များကို အရည်ပျော်စေခြင်း၊ အကျိုးဆက်အားဖြင့် အချို့သော အရပ်ဒေသများကို ပင်လယ်တွင်းသို့ နစ်မြုပ်စေ၏။ ကင်ဆာရောဂါ၊ မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆိုင်သောသန္ဓေပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်စေ၏။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပူချိန်လွန်ကဲမှုများ မြင့်မားလာပြီး အပူပိုင်းဒေသများကို ပို၍ခြောက်သွေ့လာစေ၏။
နာတာရှည်အသက်ရှုကြပ်ရောဂါများ၊ ကလေးများချွတ်ယွင်းစွားမွေးဖွါးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်သော ချို့ယွင်းချက်အားနည်းချက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်နေပါ၏။ လေထဲတွင် ပါဝင်သော ဓာတ်တစ်မျိုး၏ပါဝင်မှုသည် ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်နာ၊ ပန်းနာရောဂါများကို တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၏။
အခြားတစ်ဖက်တွင် သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းကြောင့် တိရိစ္ဆာန်များသည် သူတို့၏သဘာဝတည်ရာနေရာများမှ ရွေ့လျော့လာ ကြ၏။ အခြားတစ်ဖက်မှာမူ လူအများသည် အမွေးများနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် တိရိစ္ဆာန်များကို ရှာဖွေ သတ်ဖြတ်ကြ၏။ သုတေသနသမားများပြောဆိုသည်မှာ နာရီတိုင်းနာရီတိုင်း သစ်ပင်များ တိရိစ္ဆာန်များ ကမ္ဘာမှ ပျောက်ကွယ်နေသည်ဟု ဆို၏။ ပညာရှင်များပြောဆိုကြသည်မှာ ယနေ့ခေတ်ပြဿနာများသည် ပြဿနာဖြစ်ပေါ်စေသောနေရာများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်တော့ဘဲ သည်အရာများသည် ကမ္ဘာ့ပြဿနာများဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုကြ၏။
အထက်ပါဖော်ပြချက်များအရ အဆိပ်အာနိသင်ရှိတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ တောပြုန်းတီးမှုများ၊ သဲကန္တာရဖြစ်ထွန်းမှုများ စသဖြင့် လူသားတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အကြောင်းတရားများစွာက နောက်ထပ် အကျိုးဆက်များစွာကို ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့သည်ဟု သိရှိရ၏။
ဤနေရာတွင် မြတ်ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိ-မရှိ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် ယနေ့မျက် မှောက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စဉ်များ သက်ဆိုင်မှု ရှိ မရှိဆိုသော မေးခွန်း ဖြစ်ပါ၏။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သာသနာတစ်ခုလုံးသည် သစ်ပင်တောတောင်တို့၏အရိပ်အယောင်များဖြင့် လွှမ်းမိုးနေပါ၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာ သနာနှင့်သစ်ပင်တောတောင်တို့ကို ခွဲခြားရအံ့ မထင်။ တောတောင်သစ်ပင် မရှိလျင် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သာသနာသည်လည်း မရှိ ဟု ဆိုရလောက်အောင်ပင် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သာသနာနှင့်တောတောင်သစ်ပင်များကား စပ်ဆက်လျက်ရှိချေ၏။
မြတ်ဘုရားနှင့် တောတောင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ သက်ဆိုင်မှု ဤသို့ တွေ့ရှိရ၏။ မြတ်ဘုရားရှင်၏ထူးခြားသော ဖြစ်စဉ်များတွင် အလောင်းတော်ကို လုမ္ဗိနီိဥယျာဉ်တွင် မွေးဖွါးပါ၏။ သဗ္ဗညုတညဏ်တော်ကို မဟာဗောဓိပင် အောက်တွင် ရရှိ၏။ ကုသိနာရုံအင်ကြင်းတောတွင် ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်တော်မူ၏။ တဖန် တောထွက်တော်မူခြင်းကို ကြည့်ပါကလည်း တရားထူးများကို ရှာဖွေ ကျင့်သုံးရာတွင် တောတောင်ထဲမှာပင် ရှာဖွေကျင့်သုံးတော်မူ၏။ မြတ်ဘုရားသည် ရံခါရံခါ တောတောင်သစ်ပင်များရှိရာသို့ ကြွရောက်၍ တစ်ပါးတည်း သီတင်းသုံးနေထိုင်လေ့ရှိပါ၏။ ဥပမာ- ပါလိလေယျတောသို့ ကြွရောက်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါ၏။
ဂေါတမမြတ်ဘုရားသည် ညောင်ဗုဒ္ဓဟေပင်တွင် ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသကဲ့သို့ ၀ိပဿမြတ်ဘုရားသည် သခွတ်ပင်၊ သိခီမြတ်ဘုရားသည် သရက်ဖြူပင်၊ ဝေဿဘူမြတ်ဘုရားသည် အင်ကြင်းပင်၊ ကကုသန် မြတ်ဘုရားသည် ကုက္ကိုပင်၊ ကောဏာဂုံမြတ်ဘုရားသည် ရေသဖန်ပင်၊ ကဿပမြတ်ဘုရားသည် ပညောင်ပင် စသဖြင့် သစ်ပင်များကို အမှီပြု၍ ဘုရားအဖြစ်သို့ အသီးသီး ရောက်ရှိ ကြပါ၏။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကိုယ်စားတော်အားဖြင့် လာရောက်သူများအား ဖူးမြော်ရန် အာနန္ဒာဗောဓိပင်ကို ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်တွင် စိုက်ပျိုးစေခဲ့၏။ အသောကမင်းလက်ထပ်တွင် ဗောဓိပင်၏တောင်ဘက်ကိုင်းကိုဖြတ်၍ သီဟိုလ်သို့ သယ်ဆောင်သွားစေခဲ့၏။ ယနေ့တိုင် ထိုဗောဓိပင်သည် သက်ရှိ ထင်ရှားရှိနေဆဲဖြစ်ပါ၏။ ဗောဓိပင် စိုက်ပျိုးခြင်းဓလေ့သည် မြတ်ဘုရားရှင်သာသနာထွန်းကားရာအရပ်များ၌ ဘုရားရှင်၏သာသနာနှင့်အတူ လိုက်ပါထွန်းကားလျှက် ရှိပါ၏။
တရားတော်များနှင့်သဘာဝတောတောင်ပတ်ဝန်းကျင် သက်ဆိုင်မှုကို ဤသို့ တွေ့ရှိရ၏။ ဓမ္မကို စတင်တီးခတ်သောနေရာသည် တောတောင်ထဲမှာပင် ဖြစ်ပါ၏။ အနေကဇာတိသံသာရံ-စသဖြင့် ဥဒါန်းကျူးရင့် ခြင်းသည် မဟာဗောဓိပင်အောက်မှာ ဖြစ်သကဲ့သို့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကို ဆင်ခြင်ရာမှာလည်း ဗောဓိပင်အောက် (ပလ္လင်္ကသတ္တာဟ၊ ဗောဓိသတ္တာဟ)မှာပင် ဖြစ်ပါ၏။ ဖလသမာပတ်ချမ်းသာကို ခံစားရာတွင် အဇပါလညောင်ပင်အောက် (အဇပါလ သတ္တာဟ)၊ ကျည်းပင်အောက်(မုစလိန္ဒသတ္တာဟ)၊ လင်းလွန်းပင်အောက် (ရာဇာရတနသတ္တာဟ)တွင် ဖြစ်ပါ၏။ တရားဦး ဓမ္မစကြာကို ဟောကြားရာမှာလည်း မိဂဒါဝုန်တောမှာဖြစ်၏။ သစ်ပင်တောတောင်များ၏အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ သီတင်းသုံးနေထိုင်၍ တရားတော်များကို ဟောကြားသည်မှာ များပြားစွာ ရှိ၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အစဆုံးတရားတော်မှ နောက်ဆုံး တရားတော်တိုင် အောင်သည် သစ်ပင်အောက်မှာပင် ဟောကြားခဲ့ပါ၏။ ဓုတင်ကျင့်စဉ်များတွင် တောတောင်ထဲတွင် ကျင့်သုံးဆောက်တည်ရသော ဓုတင်ကျင့်စဉ်များ ပါဝင်ပါ၏။
ရဟန်းတော်များနှင့် တောတောင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သက်ဆိုင်မှုကို ဤသို့ တွေ့ရ၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် ဗောဓိပင် အောက်မှာပင် ဘုရားရှင်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသကဲ့သို့ အခြားသော တပည့်သာဝက သာဝိကာမများမှာလည်း ယေဘုယျအားဖြင့် တောတောင်သစ်ပင်တို့နှင့်စပ်ဆက်လျက်သာလျင် တရားထူးကို ရခဲ့ကြပါ၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတော်များအား မေတ္တသုတ်သင်ပေးပြီးနောက် တောတောင်ထဲသို့ ပြန်လည်ကြွရောက်စေခဲ့ပါ၏။ ရဟန္တာမထေရ်ကြီးများစွာမှာ တောတောင်တွင် ပျော်မွေ့သူများအဖြစ် ကျမ်းဂန်များစွာမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါ၏။ ရဟန်းဖြစ်ပြီးသောသူများကို နေရာ ကျောင်း အခက်အခဲရှိပါက သစ်တစ်ပင်အောက် ၀ါးတစ်ပင်အောက်မှာ သီတင်းသုံး နေထိုင်ရန် မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ညွှန့်ကြားတော်မူပါ၏။ ရဟန်းတော်များအား သစ်ပင်မခုတ်ရန် ပညတ်တော်မူထား၏။ ထိုအတူ ရဟန်းတော်များ၊ ရှင် သာမဏေများအား စိမ်းစိုသော မြက်သစ်ပင်ရှိရာအရပ်၌လည်းကောင်း၊ ရေ၌လည်းကောင်း တံထွေးစသည်ကို ထွေးခွင့် မပြုပါ။ ကျင်ကြီး ကျင်ငယ် စွန့်ခွင့်မပြုပါ။
ကမ္မဌာန်းအားထုတ်ရန် တောတောင်တို့သည် သင့်လျော်ကြောင်းကို ဤသို့ သိရှိရ၏။ တောထွက်မူစဉ် ဥရုဝေလတော သေနာနိဂုံးသို့ရောက်သောအခါ အကြံဖြစ်ပုံကို မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ဗောဓိမင်းသားအား ပြန်လည်မိန့်ကြားသည်မှာ “ အချင်းတို့! မြေအဖို့သည် မွေ့လျော်ဖွယ် ရှိစွတကား၊ တောအုပ်သည် မွေ့လျော်ဖွယ်ရှိစွတကား၊ မြစ်သည်လည်း စီးဆင်းနေ၏၊ ဆိပ်ကမ်းသည်လည်း သန်းရှင်း၍ မွေ့ လျော်ဖွယ်ကောင်း၏၊ ဆွမ်းခံရွာသည်လည်း နီးနား၏၊ ဤအရပ်သည် ကမ္မဌာန်း အားထုတ်လိုသော အမျိုးသားအား ကမ္မဌာန်းအားထုတ်ခြင်းငှါ သင့်လျော်ရာ၏တကား” ဟု ဖြစ်ပါ၏။
တောတောင်တို့၏သာယာဖွယ်ရာများကို ဤသို့ ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြ၏။ ကာဠုဒါယီမထေရ်သည် တောတောင်ဘွဲ့ ပါဠိကဗျာ ဂါထာပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကို သီကုံးရွတ်ဆိုလျှက် မြတ်ဗုဒ္ဓအား ကပိလ၀တ်သို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့၏။ မြန်မာစာဆိုတော် ရှင်ဥတ္တမကျော်က ရေးသားခဲ့ရာ “တောလား”ဟု ကျော်ကြား၏။ ဤဂါထာများသည် ဆောင်ကုန်နွေကူး တပေါင်းလ ရာသီထူး၏ မပူမအေးဖြစ်၍ သာယာပုံ၊ သစ်ပင်များ ရွက်ညွန့်တွေ ထွက်ချိန်ဖြစ်၍ ရှုမငြီးအောင် သာယာပုံ၊ ရာသီနှင့်တောတောင် သာယာလှသဖြင့် သားကောင်များ၊ ကျေးငှက်များလည်း သာသာယာယာ တွန်ကျူးလျက် မြူးတူးရွှင်ပျော်နေကြပုံ အစုံစုံ တို့ကို ဖေါ်ပြရေးခြယ်ထားသော တောတောင်ပန်းချီကားကြီး ဖြစ်ပါ၏။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၊ အရှင်မဟာကဿပ၊ အရှင်အနုရုဒ္ဓါ၊ အရှင်အာနန္ဒာ၊ အရှင်ရေ၀တ-တို့သည် ဂေါသိင်္ဂအင်ကြင်တော၏ သာယာဖွယ်ကို ဤသို့ ပြောဆိုခဲ့ကြ၏။ အရှင်သာရိပုတ္တရာသည် “ ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ! ဂေါသိင်္ဂမည်သော အင်ကြင်တောသည် မွေ့လျော်ဖွယ်ရှိ၏။ ညဉ့်သည် အပြစ်တို့မှ ကင်း၏။ အင်ကြင်ပင်တို့သည် ပင်လုံး ကျွတ် ပွင့်ကုန်၏။ နတ်၌ဖြစ်ကုန်သော ပန်းရနံ့တို့ကဲ့သို့ ကြိုင်လှိုင်ကုန်၏။ ငါ့ရှင့် အာနန္ဒာ အဘယ်ကဲ့သို့သော ရဟန်းဖြင့် ဂေါသိင်္ဂ မည်သော အင်ကြင်းတောသည် တင့်တယ်နိုင်ရာအံနည်း” ဟု မေးမြန်းခဲ့သည်။
ပိဋကတ်တော်လာ တောအုပ်ကြီးများနှင့် မြစ်ကြီးများ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင့် စပ်ဆက်မှုရှိခဲ့သော တောအုပ်ကြီးများ၊ မြစ်ကြီးများကို ဤသို့ ဖတ်ရှု့ခဲ့ရ၏။ တောအုပ်ကြီးများမှာ - မဟာဝုန်တော၊ ပါလိလေယျတော (ရက္ခိတ၀နသဏ္ဍ ဘဒ္ဒသာလာ)၊ မိဂဒါဝုန်တော၊ အနုပိယ အမ္ဗ၀န၊ ဣစ္ဆာနင်္ဂလတောအုပ်၊ သုဘဂတော အုပ်-စသဖြင့် ဖတ်ရှု့ရ၏။ မြစ်ကြီးများမှာ - အစီရ၀တီမြစ်၊ ယမုနာမြစ်၊ ဂင်္ဂါမြစ်၊ သရဘူမြစ်၊ မဟီမြစ်၊ အနော်မာမြစ်၊ ရောဟိဏီမြစ်၊ ကကုဓမြစ်၊ ဟိရည၀တီမြစ် ၊အရ၀စ္ဆမြစ်၊ နီလာဝါဟနမြစ်၊ စန္ဒဘာဂမြစ်၊ ဗြဟ္မပုတ္တမြစ်- စသဖြင့် တွေ့ရှိရ၏။
သစ်ပင်များ၊ ဥယျာဉ်များကို ဤသို့ စိုက်ပျိုးစေခဲ့၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ၀နရောပသုတ်တွင် “အကြင်သူတို့သည် သစ်သီး ဥယျာဉ်၊ ပန်းဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးကုန်၏။ တောသစ်ပင်ကို စိုက်ပျိုးကုန်၏။ တံတားခင်းကုန်၏။ အကြင်သူတို့သည် ရေအိုးစင်ကိုလည်းကောင်း၊ ရေတွင်းကိုလည်းကောင်း၊ နေရာကျောင်းကိုလည်းကောင်း လှုဒါန်းကုန်၏။ ထိုသူတို့အား နေ့၌လည်းကောင်း၊ ညည့်၌လည်းကောင်း အခါခပ်သိမ်း ကောင်းမှုသည် တိုးပွါး၏။ ထိုသူတို့သည် တရား၌ တည်ကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် ကောင်းသောအလေ့အထ စာရိတ္တသီလနှင့် ပြည့်စုံကုန်၏။ တိုသူတို့သည် နတ်ပြည်သို့ သွားရ၏။” ဟု မိန့်ကြားထားပါ၏။
အသောကမင်းကြီးကျောက်စာများတွင်လည်း ရေတွင်းရေကန်များတူးဖော်ရန်၊ သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးရန်၊ သားငှက်တိရစ္ဆာန် များကို မသတ်ဖြတ်ရန် စသဖြင့် ရေးထိုးထုထွင်းထား၏။
သစ်ပင်များ၏ကျေးဇူးကို ဤသို့ ဖော်ညွှန်း၍ အသိသက်သေပြုခဲ့၏။ မြတ်ဘုရားရှင် ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူပြီးနောက် သတ္တသတ္တာဟ ၄၉-ရက်တွင် ဘုရားဖြစ်တော်မူရာ ပလ္လင်တော်နှင့် ဗောဓိပင်ကို မမှိတ်မသုံကြည့်၍ ခုနစ်ရက် စံတော်မူကာ နောက်ဆုံးကြည့်ခြင်း(အနိမိသသတ္တာဟ)ဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်အသိအမှတ် ပြုတော်မူခဲ့၏။
ချမ်းသာမှုကိုပေးသော အရိပ်ငါးမျိုးကို လောကနီတိ၌ ဖော်ပြထား၏။ ယင်းတို့မှာ သစ်ပင်ရိပ်၊ မိဘရိပ်၊ ဆရာအရိပ်၊ မင်းရိပ်၊ ဘုရားရိပ်တို့ ဖြစ်ရာ သစ်ပင်ရိပ်သည်လည်း ကျေးဇူးများသည်ဟု ဖော်ပြထား၏။
တောတောင်သစ်ပင်ကို ဥပမာထား၍ ဟောကြားသောတရားတော်များကို ဤသို့ တွေ့ရ၏။ “ နွေးဥတု၏အစဖြစ်သော တန်ခူးလ၌ ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်သော အဖျားရှိသော တောအုပ်သည် ကျက်သရေရှိ၍ တင့်တယ်သကဲ့သို့ ထိုတောအုပ်လျင် ဥပမာရှိသော နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်စေတတ်သော ပရိယတ္တိတရားတော်မြတ်ကို မြတ်သော နိဗ္ဗာန်အကျိုးငှါ ဟောတော်မူ၏။” ဟု ရတနသုတ်တွင် ဟောကြားခဲ့ပါ၏။
မဟာသာလပုတ္တသုတ်တွင် ဟိမ၀န္တာတောင်မင်းကို အမှီပြု၍ သစ်ပင်ကြီးတို့သည် ငါးမျိုးသောအကြောင်းတို့ဖြင့် ကြီးပွါးကြကုန်၏။ (၁) အကိုင်းအခက်တို့ဖြင့် ကြီးပွါးခြင်း (၂) အခေါက်ဖြင့်ကြီးပွါးခြင်း (၃) အပွေးဖြင့် ကြီးပွါးခြင်း (၄) အကာဖြင့်ကြီးပွါးခြင်း (၅) အနှစ်ဖြင့်ကြီးပွါးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါ၏။ ဤဥပမာအတူ သဒ္ဓါတရားရှိသူအမျိုးသား တစ်ဦး တစ်ယောက်ကို အကြောင်းပြု၍ အခြားအိမ်နေသူအများမှာလဲ သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာတို့ဖြင့် ကြီးပွါးကြကုန်၏။
မြတ်ဘုရားရှင် ခုတ်ဖြတ်ခိုင်းသော သစ်ပင်တောတောင်ကား ဤသို့ ဖြစ်၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတော်များအား “ ရဟန်းတို့! တဏှာတည်းဟူသော တောကို ခုတ်ဖြတ်ကြကုန်လော့၊ ပြကတေ့ သစ်ပင်ကို မခုတ်ဖြတ်ကြကုန်လင့်၊ တဏှာဟူသော တောကြောင့် ဇာတိစသော ဘေးဖြစ်၏။ တဏှာဟူသော တောကြီး တောငယ်ကို ခုတ်ဖြတ်၍ တဏှာဟူသော တောမှ ထွက်မြောက်ကြကုန်လော.” ဟု ပဥ္ဒမဟလ္လကဘိက္ခုဝတ္ထုတွင် မိန့်ကြားထားပါ၏။
ဤသို့ဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသား၏သဘာဝများ ဆက်သွယ်နေမှုကို ချဉ်းကပ်ပြ၏။ လူသားနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိအောင် အခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးခဲ့၏။ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုနှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု ရှု့ထောင့်မှ သစ်ပင်၊ တိရိစ္ဆာန်၊ လူများကို ကြည့်ရှု့ပြခဲ့၏။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပြဿနာများအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖြေရှင်းချက်များကို ထုတ်ဖော်ပေးခဲ့၏။ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်နွမ်းမှုကဲ့သို့သော အန္တရာယ်များသည့် စွန့်စားမှုမျိုးကို တိုက်တွန်းရန် တစ်စုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အား ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ ဖော်ပြပါ အချက်များသည် မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် ယနေ့မျက်မှောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စဉ်များ သက်ဆိုင်မှု ရှိ မရှိဆိုသော မေးခွန်း၏အဖြေများ ဖြစ်ပါ၏။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Thursday, June 24, 2010